खुसिको- खबरदैलेखको खानीबाट पेट्रोल कहिले निस्किएला ? – News Nepali Dainik
खुसिको- खबरदैलेखको खानीबाट पेट्रोल कहिले निस्किएला ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०२, २०७७ समय: १८:२०:४६
दैलेखमा रहेको भनिएको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन र अन्वेषण गर्न नेपाल र चीन सरकारबीच २०७२ सालमा सहमति भएको थियो । २०७६ सालको कात्तिकमा नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त टोलीले अध्ययनको सुरुवात गरेको थियो । अध्ययन र अन्वेषणको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग चीन सरकारले नै बेहोर्ने सहमति भएको थियो । (उज्यालो बाट)
Last Updated on: March 15th, 2021 at 6:20 pm